IBM iri kufambisa OpenPOWER kuLinux Foundation | Linux Vakapindwa muropa
IBM iri kufambisa OpenPOWER kuLinux Foundation
RISC-V yakaita zvakafanana neyakavhurwa sosi ISA chirongwa chekushandisa processor. IBM yakavhura zvivakwa zvayo pasi pe OpenPOWER chirongwa, asi zvaitaridza kuti paive paine zvimwe zvinhu zvisina kujeka muchirongwa ichi izvo zvisina chekuita neRISC-V pachena. Asi ikozvino, kufamba uku kutsva kunogona kuchinja zvinhu neimwe nzira, uye zvinoita sekunge IBM iri kufambisa OpenPOWER pasi pemuraira weLinux Foundation.
IBM ndiye anovandudza ISA PPC iyo inogona kushandiswa neakasiyana michina, kusanganisira IBM yega. Asi IBM yaida kuenda kumberi zvishoma ndokugadzira OpenPOWER Nheyo kupa yakawanda yakavhurika sosi "zvidimbu" zvevamwe vabatsiri kuti vashandise uye vape. Iye zvino zvinoita sekunge chimwe chinhu chiri kubika, kana kuti, chimwe chinhu chiri kufamba uye chingave chakanakira munhu wese ...
Ken King, maneja weOpenPOWER, anoti sangano riri kuchinja uye ivo vari kuzoifambisa pasi peLinux Foundation. Uye zvinoita sekunge ivo vanodawo kupa zvimwe zvivakwa uye hwaro hwehunyanzvi hwePOWER nhepfenyuro kune vanogadzira uye mainjiniya kuti vavake pane iyi tekinoroji, kunze kwekuvhura ISA. SIMBA ISA kumisikidza izvozvi zvave zvemahara uye ikozvino IBM's IP-based processor inogona kugadzirwa mune chero fekitori uye inosanganiswa nezvimwe zvigadzirwa zvehardware.
Asi hazvisi zvese zvakavhurika, ndosaka kufarirwa kwayo uye kugamuchirwa nenharaunda yakanga isina kunaka sezvakaitika mune RISC-V, kunyangwe hazvo vamwe "nyanzvi" vakatsigira kuti OpenPOWER ichave "yakavhurika sosi mapurosesa emangwana ..." Pari zvino pasi pe Linux Foundation zvinhu zvinoshanduka, kutaura zvazviri, IBM inoona sosi yakavhurika semukana mukuru pane marezenisi uye kutonga maererano naMambo. vamwe vanogona kuzviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM iri kufambisa OpenPOWER kuLinux Foundation
ALT Linux P9 XNUMXth Platform Yakazarurwa